Umaki: izinkinobho zokwabelana komphakathi | Martech Zone
Maka: izinkinobho zokwabelana komphakathi
Njengoba i-WordPress iqhubeka nokuthwebula i-markethare yamabhizinisi, siyaqhubeka nokuthola izicelo eziningi ezivela emabhizinisini amakhulu anamasayithi amahle aklanyelwe izinkampani zokubeka uphawu nemidwebo emangalisayo - kepha awanakho ukwenza okuhle okudingekayo ukuthinta imiphumela yawo yokusesha. Ngaphambi kokuthi sisebenzele amasu wokuqukethwe wamakhasimende ethu, siqala ngokubasiza ngokusebenziseka okuhle. Akukho ukusetshenziswa okuningi kokutshala imali kokuqukethwe kwe-premium uma isayithi lakho lingatholakali!
NgoLwesibili, Novemba 18, 2014 Douglas Karr
Abathengi abangaphezu kwama-71% bathonywe yimithombo yezokuxhumana kepha yi-3% kuphela eholela ekuguqulweni. Leli yigebe elikhulu futhi abakwaGetSocial bangathanda ukuvala lelo gebe ngokuguqula isayithi lakho le-ecommerce libe indawo yokuthengisa yomphakathi lapho okuqukethwe kwakho kwabelwana ngakho kalula, idatha ethwetshuliwe, abathonya betholwa, futhi ukuguqulwa kukalwa ngokunembile. IGetSocial inikezela ngezici nezinzuzo ezilandelayo Nika amandla abasebenzisi bakho ukuthi babelane ngokuqukethwe kwakho - I-GetSocial ihlanganisa izinkinobho zokwabelana ngokwezifiso, a